Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2018 → juillet → 12 → Colères sur base de suspicion : Six gendarmes séquestrés par le fokonolona à Betafo
safidy 12 juillet 2018 at 15 h 50 min · Edit
Rehefa nojerena sy natao ny perquisition dia tsy silamo mahery fihetsika araka ny voalaza no hita fa Kristianina mivavaka. Tsy nahitana lavaka nanafenana olona izany. Noho izany aleo hanao fanadihadiana ny zandary hahitana ny marina. Raha mandainga ilay mpiandry omby dia soloin’ny fokonolona ny 4×4 nosimbaina ary asaina mifona eo anatrehan’ny haino aman-jery ry zareo satria mpanosi-potaka olona fotsiny. Raha marina ny an’ilay mpiandry omby dia gadraina daholo ilay mpikambana ao amin’ny associations ary ary aely eran’ny Madagasikara. Indrindray laingaingalainga tsy mari-pototra dia manimba zavatra. Aoka samy ho tompon’andraikitra amin’izay ataony ny tsirairay
tsirah 12 juillet 2018 at 14 h 44 min · Edit
mba hisian’ny filaminana sy tsy fikorotanana manoloana ny toe-drahaharaha mafana toa izao dia mihezaka ny mamaha olona foana ny zandary mba hanantanterahany ny asany antsakany sy andavany